Na Vijfhuizen, n'oge na-adịghị anya, a ga-abụ ihe ncheta iji cheta ndị ahụ ọdachi MH17. Ọ bụ usoro nke MH17 Foundation nke National Ncheta. Ihe dị oke mma bụ ihe nnọchianya nke ihe ncheta ahụ. Anyị na-achọ maka anya na-ahụ ihe niile na akwukwo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dịka enwere ike ịhụ na ihe nkiri nke onye na-ese ihe banyere ihe ncheta dị n'okpuru. Na mgbakwunye, [...]
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 30 August 2016	• 1 Comment
Cybernetics bụ okwu nke sitere na Greek κυβερνήτης (kybernētēs, mate) na bụ sayensị nke na-ejikọta njikwa nke usoro iheomume na nke usoro site na nzaghachi. Otu cyborg (nke blọọbụ cybernetic nke Bekee ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta cybernetic) bụ nchịkọta anụ ahụ nke mmadụ na igwe. Usoro ndị a na-adọrọ mmasị idebe [...]
David Bowie nwụrụ 2 ụbọchị mgbe ụbọchị ọmụmụ 69e gasịrị
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 11 January 2016	• 18 Comments
Ụbọchị abụọ mgbe ụbọchị ọmụmụ ya gasịrị, ozi ahụ na-egosi na onye edemede Aleister Crowley na-akwado David Bowie nwụrụ mgbe ọ dị afọ 69 n'oge na-adịghị anya mgbe ọ malitere ịpịpụta album ọhụrụ ya bụ 'Blackstar'. Ọnwụ nke Bowie bụ ihe ijuanya nke ọha mmadụ nwere. Ọ bụ onye a na-akwanyere ùgwù nke a ma ama, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nnukwu, onye na-egwu egwu. Nke ahụ dịkarịa ala [...]
Iji chọpụta ihe Krismas pụtara n'ezie, ọ bụ ntakịrị nke egwu ala n'akụkọ ihe mere eme. Ọ na-amalite ntakịrị ọhụụ: Na omenala ndị ọgọ mmụọ nke Nordic, a gbara 12 ọkụ ruo ọtụtụ ụbọchị n'osisi osisi buru ibu ebe a na-achụ anụmanụ na ụmụ mmadụ àjà maka ịsọpụrụ chi Yule. Ogwe osisi ahụ na-anọchite anya akụkụ ahụ nwoke. [...]
Ndi 911 nke 'Crime of the century' nke Supertramp na 1979 ji?
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 19 October 2015	• 33 Comments
N'uhuruchi ikpeazu, m na enyi m nọ n'ụgbọala ahụ nke ndị na-akwado Supertramp, site na '70' afọ. N'ihi ya, egwu ahụ guzoro ọtọ ma na-eme ihe n'eziokwu, ọ masịrị m. N'oge gara aga, achọtara m egwu dị egwu, dị egwu na obi ụtọ. O gosiri m ihe mkpuchi nke album 'Breakfast in America' site na [...]
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 30 September 2015	• 14 Comments
Ụnyaahụ m debere otu isiokwu nke m mere ka ọhụụ m nwee ike ịhụ Saturn symbolism na Islam. N'ebe a, a na-elekwasị anya karịsịa na Kaaba na Mecca ma jiri ya tụnyere ogige nke Saturn. Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo arụmụka maka ọtụtụ. N'ezie, ọ bụghị nzube m [...]
Ebe ọ bụ na enwere m ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Muslim na Facebook, m na-ajụkarị ajụjụ banyere otu m ga-esi kwuo na okpukpe bụ ihe ngosi nke òtù nzuzo Saturn. Iji malite, achọrọ m ime ka o doo anya na m na-asọpụrụ ndị na-eche banyere okwukwe ha. Ha na-emekarị nke ọma na-etinye ndụ na ndụ ha ma nwee [...]
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 21 September 2015	• 10 Comments
Onye ọ bụla nke na-akpọ ụbọ akwara akpọwo abụ ọbụlagodi na 1x n'oge ndụ ya, mana ma eleghị anya ọtụtụ mgbe. N'ezie ọ bụkwa ezigbo mma guitar na solos na abụ dị iche iche n'oge ya. Ihe odide a abụwo ihe na-enweghị isi, ma nke ahụ bụ mgbe ikpe na egwu sitere na ndị a maara nke ọma [...]
CERN, Shiva, Vedas, Saturn na mbibi a ga-ebibi mmadụ
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 17 August 2015	• 6 Comments
Iji gaa n’ihu ịgụ edemede a ma ọ bụ soro na mkparịta ụka mkparịta ụka, ị nwere ike bụrụ onye otu site na ịpị bọtịnụ ‘nkwado gị’. Nke a ga - eme ka ị nweta akụkụ ndị ọzọ nke ederede na nwee nnọkọ ma sonye n'ọgụ maka ụwa ka mma. Can nwere ike ugbu a isonye. […]
Ihe nnọchianya ndị dị na mbara igwe si n'oge ochie kọwaara pyramid, 'anya ọhụhụ niile' na ihe ndị ọzọ
gbara akwụkwọ SYMBOLIC	by Martin Vrijland	na 7 April 2015	• 1 Comment
Ị maara na ndị ọkà mmụta ihe ochie achọtawo mammoth oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, ụfọdụ n'ime ha ka nwere nri na ọnụ? Achọrọ m ịgwa gị banyere nke a, n'ihi na ọ na-egosi nzere na mberede, nke mere na echebewo foduru ahụ nke ọma. Umu ndi mmadu bi na ebe ugwu di iche iche, ebe o doro anya na o nweghi nnukwu okpu mmiri, dika anyi di ugbu a [...]
Nleta ha: 2.629.566
Wilfred Bakker op Black Life Matter 100% mana ị chọrọ ime South Africa lynch? Ole ndị bara uru? George Floyd na nkọwa sara mbara
Future op Black Life Matter 100% mana ị chọrọ ime South Africa lynch? Ole ndị bara uru? George Floyd na nkọwa sara mbara
Chantal74 op Black Life Matter 100% mana ị chọrọ ime South Africa lynch? Ole ndị bara uru? George Floyd na nkọwa sara mbara
Riffian op iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5